भारतमा गत २४ घण्टामा १ लाख ६१ हजार जनामा संक्रमण पुष्टि/१७३३ जनाको मृत्यु
काठमाडौ‌ । भारतमा पछिल्लो २४ घण्टामा थप १ लाख ६१ हजार ३ सय ८६ जना मानिसमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत २४ घण्टामा २ लाख ८१ हजार १ सय ९ जना संक्रमणमुक्त ...
imagekhabar.com . ४ महीना अघि पूरा समाचार पढनुहोस
काठमाडौं । साताको चौथो दिन बुधबार सेयर बजार बन्द हुनेछ । आज बुधबार तामाङ समुदायले नयाँ वर्षको रुपमा मनाउने सोनाम ल्होछार पर्व परेकाले सरकारले सार्वजनिक बिदा दिए सँगै सेयर बजार पनि बन्द हुने नेप्से...
माघ १९ अर्थात आजको दिनलाई ‘कालो दिन’का रुपमा स्मरण गरिँदै
काठमाडौं । आज माघ १९ अर्थात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासकीय महत्वाकांक्षाले शासन हातमा लिएको दिन । यो दिनलाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कालो दिनको रुपमा लिने गरिन्छ । २०६१ साल माघ १९...
श्रममन्त्रीद्वारा आफ्नो तलबभत्ता क्याम्पसलाई
काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठले आफ्नो तलबभत्ताबापतको रकम तनहुँको भानु–९ स्थित पुर्कोट कालिका बहुमुखी क्याम्पसलाई प्रदान गर्नु भएको छ । तनहुँ क्षेत्र नम्बर ...
एमाले सचिवालय वैठक बस्दै
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को सचिवालयको बैठक आज दिउँसो बस्दैछ । बैठकमा स्थानीय निर्वाचनको तयारी, पार्टीको नियमावली र जनसंगठन सञ्चालन निर्देशिका निर्माण, विभागहरू गठन, प्रदेश, जिल्ला र जनसंगठनका अधिव...
विदेशी लगानीले मुलुक समृद्ध बन्दैन : गुराँगाई, पूर्व अध्यक्ष इपान
काठमाडौं । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इपान) का पूर्व अध्यक्ष तथा जलस्रोतविद् शैलेन्द्र गुराँगाईले आफैं लगानी नगरी व्यक्तिको जीवनमा समृद्धि नआउने दाबी गर्नु भएको छ । संखुवासभा–काठमाडौ जर्ना...
धनकुटामा अटो दुर्घटना हुदाँ एक जनाको मृत्यु
धनकुटा । धनकुटामा गएराति अटो दुर्घटना हुदाँ एक जनाको मृत्यु भएको छ । धनकुटा नगरपालिका ७ जिरोप्वाइन्टबाट धनकुटा बजार तर्फ जादै गरेको मे १ ह ४४७४ नम्बरको अटो दुर्घटना हुदाँ धनकुटाको छथरजोरपाटी गाउँप...
सोनाम ल्होछारको अवसरमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्षनेताहरुले दिए शुभकामना
काठमाडौं । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख लगायत शीर्षनेताहरुले पनि सोनाम ल्होछारको अवसरमा शुभकामना दिएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोनाम ल्होछारबाट बृहत् राष्ट्रिय एक...
तामाङ समुदाय सोनाम ल्होसार मनाउँदै
काठमाडौं । तामाङ समुदायले आज सोनाम ल्होसार अर्थात नयाँ वर्ष मनाउँदै छन् । तिब्बती परम्परा अनुसार माघ शुक्ल प्रतिपदाका दिन तामाङ समुदायले यो पर्व मनाउने गर्दछन् । जस अनुसार आजदेखि २८५८ औँ वर्ष सुरु...
अमेरिकाले रुसलाई जबर्जस्ती युद्धमा धकेल्न खोजेको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको आरोप
काठमाडौं । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकामाथि रुसलाई जबर्जस्ती युद्धमा धकेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ । रुस र अमेरिकाबीच युक्रेनलाई लिएर भईरहेको तनावका बीच मुख खोल्दै राष्ट्रपति पुटिन...
अफ्रिका कप फुटबलः सेमिफाइनलमा आज सेनेगल र बुर्किना फासो भिड्दै
काठमाडौं । अफ्रिका कप अफ नेशन्स फुटबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनल खेलहरु आजबाट हुनेछन् । क्यामरुनमा जारी प्रतियोगिताको पहिलो सेमिफाइनल खेलमा आज राति पौने १ बजे सेनेगल र बुर्किना फासो भिड्नेछन् । क्वा...
गठबन्धन भत्किए पनि एमसीसी अघि बढाउन प्रधामन्त्री प्रतिबद्ध
काठमाडौं । एमसीसीका विषयमा भएको अन्योलले देशलाई घाटा हुने भन्दै प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा सम्झौतालाई संसदबाट अविलम्व पारित गराउन प्रतिबद्ध देखिएकान छन् । तर सहयात्री माओवादी केन्द्र र एकीकृत ...
घरभित्रै काटिन्छ गाई !
४० किलो मासुसहित तीन समातिए बाँके । प्रहरीलाई बिहान १० बजे खजुराको चमकदारपुरमा गाई काटेको खबर आयो । इलाका प्रहरी कार्यालय, धनौलीको टोली चमकदारपुर पुग्यो । प्रहरीको गाडी देखेपछि वासिम साई भागे । वा...
भारतमा ६३१ खर्बको बजेट : नेपाललाई १२ अर्ब अनुदान
काठमाडौं । भारत सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०२२/२३ का लागि ६ सय ३१ खर्ब नेपाली रुपैयाँ (३९४ खर्ब ४९ अर्ब भारु) बराबरको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सितारमणले मंगलबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बज...
एमसीसीबारे एमाले मौन
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तातिएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भने मौन देखिएको छ ।...
कानुन संशोधन आवश्यक छैन: निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ४ जेठमा एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारसमक्ष मिति प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच मंगलबार...
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य इतिहासकै महँगो
काठमाडौं । निगमले मंगलबार रातिदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलको प्रतिलिटर एक सय ४२ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलको एक सय २५ रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको छ । यो मूल्य इतिहासकै उच्च हो । निगमका अनुसार पेट्रोल...
बिचौलिया पोस्न किसानका नाममा दूधको मूल्यवृद्धि ?
काठमाडौं । सरकारले दूधको मूल्य बढाएकोमा उपभोक्तकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार सरकारले किसानको नाममा बढाएको प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५२ पैसा वास्तविक किसानको हातमा नपुग्ने र बिचौलियाको मात्र पोसिने ...
कानुन संशोधन आवश्यक छैन् :निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी ४ जेठमा एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारसमक्ष मिति प्रस्ताव गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच मंगलबार प्रधानमन्...
फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य
काठमाडौं, माघ १८ । नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । मूल्य बढाएको तीन हप्ता नबित्दै निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । निगमले मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागु ...
अटो चालक मृत फेला
नवलपुर, माघ १८ । पूर्व नवलपरासीमा अटो चालक ५२ वर्षिय माधवप्रसाद गिरी मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । उनको हत्या भएको आशंकामा अनुसन्धानअघि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरका सूचना अधिकारी डिएसपी ...
एमसीसी सम्बन्धी कुनैपनि गोप्य दस्तावेज नरहेको एमसीए नेपालबाट स्पष्ट, भ्रममा नपर्न आग्रह
काठमाडौं, माघ १८ । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)ले एमसीसी नेपाल सम्झौतासम्बन्धी कुनैपनि ‘गोप्य’ वा ‘लुकाइएका’ दस्तावेज नरहेको प्रष्टाएको छ । एमसीए नेपालले मंगलबार विज्...
पशुपतिमा विवाद : ‘कृपालु’ र ‘वनकाली’ नाममा अल्झिए कोष र समिति
हस्तान्तरणको समयमा सम्झौतामै विवाद काठमाडौं । सरकारी निकायसँग निजी क्षेत्रले गरेका सम्झौताहरू विवादमा पर्ने क्रम बढेको छ । स्पष्ट सहमति नगर्ने, सहमतिको आफू अनुकूल व्याख्या गरेर विवाद झिक्ने काम अ...
स्याङ्जा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट
स्याङ्जा, माघ १८ । स्याङ्जा जिल्ला अस्पतालमा मंगलबारबाट अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा आएको छ । लामो समयदेखि जडान गरिएको अक्सिजन प्लान्ट पर्याप्त विद्युत नहुँदा संचालनमा आउन सकेको थिएन । प्लान्ट १ करो...
काठमाडौं, माघ १८ । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेलमा अफ्रिकी राष्ट्र मरिससलाई हराएको छ । मंगलबार भएको खेलमा मरिससमाथि नेपालले १–० गोल अन्तरले हराएको हो । त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ...
होम आइसोलेसनमा बस्दा के गर्ने ?
काठमाडौं । नेपालमा तेस्रो लहरको संक्रमण बढ्न थालेको माघ १ गते यता १ लाख ३६ हजार बढी व्यक्ति संक्रमित भइसकेका छन् । यसअघि देखिएको डेल्टा भेरियन्ट भन्दा बढी संक्रामक मानिएको ओमिक्रोन भेरियन्टका कारण...
आर्थिक गतिविधि, उत्पादन र उपभोक्तामा तरलता अभावकाे प्रत्यक्ष असर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्त तरलता र व्याजदर सीमाभित्र राख्न बैंकिङ क्षेत्रलाई तरलताको आवश्यकता परेमा विभिन्न फण्डिङबाट तरलता प्रवाह गर्ने गरेको छ । लगानी, उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन र ...
नेविसंघको महाधिवेशनबारे आवश्यक निर्णय लिन्छैं : गगन थापा
काठमाडौं, माघ १८ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले केही दिन भित्रै नेपाल विद्यार्थी संघको महाअधिवेशन गराउनेबारे पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको छ । महामन्त्री थापाले यही हप्ताको शु...
जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांक तथ्यपरक नभएको भन्दै सांसदको आपत्ति
काठमाडौं, माघ १८ । सांसदहरुले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको १२ औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकको नतिजा तथ्यपरक नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अ...
एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्न १२ अर्ब आवश्यकपर्छ : आयोग
काठमाडौं, माघ १८ । निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ । आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्...
चितवनमा सुकुम्वासीलाई लालपूर्जा दिने तयारी
चितवन, माघ १८ । भरतपुर महानगरपालिका-१४ बाट टोकन वितरण कार्य सुरु भएको भूमि आयोग चितवनका अध्यक्ष बद्री तिमिल्सेनाले जानकारी दिनुभयो । महानगर प्रमुख रेनु दाहाल, जिल्ला अध्यक्ष तिमिल्सेना सहितको टोली...
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले भन्यो– ‘प्यालेस्टाइनविरुद्ध इजरायली नीति रंगभेदी’
एजेन्सी । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले प्यालेस्टाइन विरुद्ध इजरायलले लिएको नीति रंगभेदको अपराध भएको आरोप लगाएको छ । मंगलबार एक अध्ययन प्रतिवेदन जारी गर्दै एम्नेस्टीले उनीहरूलाई निम्न जातीय समूहको रूपमा ...
एक सय १० किलो गाँजासहित एक जना पक्राउ
हेटौंडा । मकवानपुर प्रहरीले एक सय दश किलो गाँजासहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय, मनहरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–५ बाट गाँजासहित एकजनालाई नियन्त्...
ह्वात्तै घट्यो अदुवाको मूल्य, किसान मर्कामा
धनकुटा । जिल्लाका किसानले उत्पादित अदुवाको मूल्य नपाएपछि मर्कामा परेका छन् । अघिल्लो वर्ष राम्रो मूल्य पाएर अदुवा खेती विस्तार गरेका किसानले यसवर्ष भने मूल्य नपाउँदा निराश बनेका छन् । अहिल्लो वर्...
एनसेलमा कुरा गर्दा ट्याबलेट पाउन सक्ने
काठमाडौं, माघ १८ । एनसेल आजियाटा लिमिटेडले आगमन कलमा कुरा गर्दा ट्याबलेट पाइने योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले चिनियाँ नयाँ वर्षको अवसरमा मलेसियन दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीसँगको सहकार्यमा पर...
धनकुटा प्रशासनबाट दिने सेवामा आलोपालो
धनकुटा । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण कार्यालयबाट दिने सेवालाई आलोपालो गर्ने भएको छ । माघ २० गतेदेखि माघ २८ गतेसम्म जिल्लाभित्रका सेवाग्राहीलाई नगरपालिका र गाउँपालिकाका आध...
महाकाली नदीमा पुल निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच सम्झौता
काठमाडौं । महाकाली नदीमा पुल निर्माणका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच सम्झौता भएको छ । मंगलबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवको उपस्थितिमा मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र ने...
कर्णाली प्रदेश सरकार र एमालेबीच सहमति
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)बीच संसद्को गतिरोध खुलाउन सात बुँदे सम्झौता भएको छ । सहमतिसँगै अब बैठक सञ्चालन गर्न एमालेले अवरोध नगर्ने भएको छ । एमालेले प्रदेश सरका...
रसुवा नाकाबाट एक साता आयात नहुने
रसुवा, माघ १८ । रसुवागढी नाकाबाट हुँदै आएका चिनियाँ सामानको आयात एक साता नहुने भएको छ । चिनियाँ नयाँ वर्ष लोसारका कारण केरुङमा रहेका भन्सार एजेन्टले कन्टेनरमा सिल लगाउन छोडिसकेकाले आगामी एक साता स...
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : प्रधानमन्त्री देउवा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उह...